We will change unicode in 2011 — MYSTERY ZILLION
We will change unicode in 2011
December 2010 edited January 2011 in MZ News
MZ site တစ်ခုလုံးကို unicode အဖြစ်ပြောင်းလဲတော့မှာပါ။ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ data အားလုံး unicode storage ကို ပြောင်းတော့ပါမယ်။ 2011 အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ မပြောင်းလဲချင် ကြားကာလမှာ unicode font ဘယ်လို သွင်းရလဲ။ unicode font မရှိပဲနဲ့ ဘယ်လို မြင်အောင် လုပ်ရမလဲ။ unicode keyboard ဘယ်လိုသွင်းရမလဲ။ စတဲ့ နည်းပညာဖြန့်ဝေ မှုပိုင်းကို အရင်လုပ်သွားပါမယ်။ ပြီးလျှင် Big Bang Approach အတိုင်း အကုန်လုံးကို ပြောင်းချပြီး unicode နှင့်သာ ရေးသားခွင့်ပြုပါတော့မယ်။
Unicode Font မရှိသူတွေ မသွင်းထားသူတွေလည်း ဘယ်လို ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်လို့ရမလဲ။
Zawgyi ပဲ သွင်းထားသူတွေ ဖတ်လို့ရအောင် ဘယ်လို လုပ်လို့ရမလဲ စတာတွေကို ရေးသားပေးသွားပါမယ်။
၁၃၇၃ မြန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ ၊ ၁၇ . ၄ . ၂၀၁၁ တွင်ပြောင်းပါမည်။
update: ပြောင်းမည့် နေ့စွဲ ပြင်လိုက်သည်။
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ် အပြောင်းအလဲမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြပါစို့။ လိုအပ်တဲ့လူအင်အားလိုရင်လည်းပြောပါ စာရေးပေးရမယ်ဆိုလည်းပြောပါ ကူရေးပေးပါ့မယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲဟာ တစ်ချိန်မှာမြန်မာစာတစ်ခုလုံးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းအလဲပါ မှားနေတာကို အမှန်ပြင်တာဖြစ်လို့ ဝမ်းသာလှပါတယ်။ စနစ်ကျတဲ့ Encoding နောက်မှာ ထပ်ပြီးလုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီးဖြစ်လာဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ် ဖြစ်လည်းဖြစ်လာမှာပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း Language Processing ကိစ္စတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်။ :cool:
ဧပြီ ၁ရက်နေ့အစား မြန်မာစာအတွက် ပြောင်းလဲမှု့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာပြက္ခဒိန်နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ ဆိုရင် ပိုမကောင်းဘူးလား စေတန်
ပြောင်းပါ ကြိုဆိုပါတယ်။ unicode နဲ ့မရေးနိုင်သမျှကာလပတ်လုံး broken english နဲ ့ပဲအားပေးသွားပါမယ်။ အားလုံးပြောင်းမှလူတွေလိုက်ပြောင်းမှာပါ။
Done , bro
၄ လ တာ အချိန်တွင်းမှာ တဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ revolution မဟုတ်ပဲ evolution အနေနဲ့ပဲ သွားမှာပါ။
Unicode ပြောင်းလိုက်တာ တော်တော် ကောင်းသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စစပိုင်းမှာတော့ Unicode မသုံးဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ နည်းနည်းတိုင်ပတ်မယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ Unicode ပြောင်းလိုက်တာ ကြိုက်ပါတယ်။
sure ... I will write in this week ..
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော်တို့လည်း မသုံးဖူးသေးလို့။ စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေလည်း အဲဒါပြောင်းထားတာထင်တယ်ဗျ။ စာလုံးတွေက တစ်မျိုးတွေ ဖြစ်နေတာ.
အသုံးပြုနည်းလေးကိုလည်း မျှော်နေပါတယ် ကိုစေတန်ရေ.. ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်လေ့လာထားချင်လို့ပါဗျာ..
I will write tonight... if I'm free
ကောင်းတယ် အကိုတိုရေ unicode ပြောင်းတာ..
ခုကအစ ပဲမို ့လားမသိ http://investmyanmar.net/ တို ့http://www.myanmartutorials.com/ သွားဖတ်ရင် unicode ဒီပြင်ဆိုဒ်တွေသွားဖတ်ရင် zawgyi ပြန်ပြောင်း
your should go to
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ... တစ်ချိန်မဟုတ်ရင်တောင် တစ်ချိန်ကျ ပြောင်းရမှာပဲ... ဖြစ်နိုင်ရင် နောက် Win7 Sp မှာပဲဖြစ်ဖြစ်... Win8 မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပါလာတာမြင်ချင်တယ်ဗျာ...
အခု unicode ကိုစိတ်၀င်စားလို့ ဒေါင်းပြီးထည့်ပြီးသွားပြီ။ နောက်ပြီး bbc bermese တောင်တင်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေအဆင်ပြေပြေမပေါ်ချင်သေးဖူး။ အဓိကသိချင်တာက ကျွန်တော်လည်း blog ရှိတယ် အဲဒီကောင်ကို zawgyi 2009 နဲ့ ရေးထားတာ အခု အဲလို unicode သုံးလို့ အဆင်ပြေပြေပေါ်အောင်ဆို ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကို အကုန်ပြန်ဖျက်ပြီး unicode နဲ့ ပြန်ရေးရမှာလားဟင် ;' အဲဒါဆိုရင်သော့ သေပြီ ကိုစေတန်ရေ
Convert လုပ်လို့ရပါတယ် ခင်ဗျားဘလော့ဆိုတာ Signature မှာရေးထားတဲ့ဆိုက်ဖြစ်မယ် အဲဒါဆိုရင် Wordpress နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ ဘလော့ကို Admin panel ထဲက Tools->Export->Download Export File နဲ့ XML အဖြစ်အကုန်လုံး Download လုပ်လိုက်ပါ။ Converter ကို အောက်မှာပြထားတဲ့လင့်ကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ ပြီးရင်တော့ Export လုပ်ထားတဲ့ XML ကို Converter သုံးပြီး Convert လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ ဘလော့ထဲမှာ Import ပြန်လုပ်လို့ရပါပြီ။
Unicode ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် Theme တွေကတော့ CSS တွေမှာ ဘယ်ဖောင့်ကိုသုံးထားကြောင်း ပြန်ပြင်ပေါ့လေ အရင်တော့ CSS တွေမှာ Zawgyi ကိုထည့်ထားတယ် အဲဒါတွေမှာ Myanmar3, Padauk, Yunghkio စသည်ဖြင့် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေ ပြောင်းပေးပါ ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ ဖောင့်မရှိလည်း ဖတ်လို့ရစေချင်ရင်တော့ Font Embed လုပ်ရပါမယ် ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ရင်တော့ စေတန်လုပ်ထားတဲ့ Wordpress Plugin ကိုသုံးပါ သူ့ဟာသူပဲ Font Embed လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Plugin ကိုတော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ နေရာကနေယူလို့ရပါတယ်။
farsiz wrote: »